Ungazikhetha njani ezona Ndlela ziBalaseleyo zesiCwangciso sakho seNkxaso yaBathengi | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 29, 2019 NgoLwesihlanu, Agasti 30, 2019 UAshwini Dave
Ngokufika kokulinganiswa kweshishini, uphononongo olwenziwa kwi-Intanethi, kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo, iinzame zenkxaso yabathengi kwinkampani yakho ngoku zidibene nodumo lwegama lakho kunye namava akho kubathengi kwi-intanethi. Ngokuqinisekileyo, ayikhathali ukuba zinkulu kangakanani iinzame zakho zokuthengisa ukuba inkxaso yakho kunye namava akho.
Uphawu lwenkampani lufana nodumo lomntu. Uzuza igama ngokuzama ukwenza izinto ezinzima kakuhle.
Ngaba abathengi bakho kunye negama lakho lixabana ngalo lonke ixesha?
Ngaphandle kokuba inkampani yakho itshona ngamazinyo kwisebe leNkonzo yaBaxumi.
Ngaphandle kokwanelisa kwaye uhlala ugqithisa kulindelo lomthengi wakho.
Ngaphandle kwazo zonke ezo zinto zasimahla (kwaye zibiza kakhulu) iinkqubo zokunikezela kunye nokunyaniseka uqhobosha rhoqo ngoku.
Ukuba iimpendulo kuzo zonke ezi ngu "ewe," kuya kufuneka ubuyele kwibhodi yokuzoba kwaye uphinde utyelele eyakho Isicwangciso senkonzo yabathengi. Ukukukhokela, masiqonde "kutheni" ngaphambi kwe "njani" kwaye sijonge ukuba yintoni ebangela ukuba abathengi bakho bagqithele kwicala "elimnyama". Nazi iimeko ezibonakalayo:
Imeko yoku-1: Wenza indlela kakhulu
Njengoko i-counter-intuitive njengoko inokubonakala ngathi, kukho into enje ngokwenza "kakhulu" xa kufikwa kwinkonzo yabathengi. Ukusoloko sibeka ingcambu kuzo zonke izinto 'ezenzekayo,' siyaqonda ukuba akunakwenzeka ukubonelela ngenkxaso kuwo onke amajelo okanye ukubakho kuyo yonke indawo ngengqondo. Ukusilela kuncedo lomntu kunye neendleko ezigqithileyo zihlala zikhankanywa njengezona zizathu ziphambili zoku. Ukufezekisa loo nto, ingcinga iyalela ukuba kungcono ukuba ukhetha amajelo afanelekileyo enza ingqiqo kubathengi bakho.
Ke, ukuba ufuna njalo, buyela emva kwisitishi esingakusebenzeliyo. Kodwa okona kubaluleke kakhulu, kwenze kamnandi. Igama elisebenzayo nelibabazekayo. Nalu uluhlu olusebenzayo lwamanyathelo onokuwenza ukuqinisekisa ukuba abathengi bakho abagqibi benomsindo kwaye bengonelisekanga (ngenxa yotshintsho ngequbuliso nolungenakuphepheka oluza kuza):
Ngena kwi Ingqondo yomthengi ukumisela imiceli mngeni / ukukhathazeka abanokujongana nako. Ngokwamkela indlela enovelwano ngakumbi, unokuzithomalalisa iintlungu kwaye ulungise ngokufanelekileyo inkxalabo yabo.
Sebenzisa utshintsho ngokwamanqanaba endaweni yokususa izixhobo zokuxhasa zonke ngaxeshanye. Enye indlela yokwenza njalo kukubonelela ngenkxaso yokukhetha kunye nokuqaqambisa eqongeni ngaphambi kokuba ususe naluphi na uhlobo lwenkxaso kubathengi.
Khetha ezinye uyilo kunye neenketho zabathengi ezenzelwe wena zakuba zivaliwe iijelo. Izikhokelo zemfundo zisebenza kakuhle ekubambeni abathengi kwaye zibeke zonke iinketho ezikhoyo kubo.
Sebenzisa ngakumbi indlela ethe ngqo yokunxibelelana xa kuziwa ekufundiseni abathengi malunga neendlela zokuxhasa ezikhoyo. Umzekelo, nantsi into i-brand Kinsta eyithumela kubathengi babo:
Umsebenzi wokuxhasa uhlala ufuna unonophelo, ugxile ekucingeni nasekuphandeni. Ukugcina inkxaso kwi-intanethi kuphela kusivumela ukuba sikuncede ngcono usombulule iwebhusayithi yakho ngendlela ekhawulezayo nenempumelelo, njengoko iinjineli zethu zikwazi ukugxila kuwo onke amandla azo ekusombululeni iinkxalabo zenkxaso yakho ngenani elincinci leziphazamiso kunye nokuphazamiseka okunokwenzeka. Oku, kuthetha ukuba izicelo zakho zenkxaso ekugqibeleni zisonjululwe ngokukhawuleza.
Cinga nge Inkxaso kubathengi njengohambo kwaye ichonge iindawo eziphambili zokuchukumisa ezazisa abathengi malunga notshintsho olwenziwe kwinkqubo yenkxaso. Oku kubandakanya imizekelo enjengokuhambisa amaphepha okufika amadala kwiforum yoluntu apho abathengi banokufumana khona izinto ezintsha nezikhuthazayo kuphuhliso oluqhubayo lwebrand-enxulumene nenkxaso okanye ngenye indlela.
I-Keyaway: I-adage, "okungcono kungcono" ayisoloko ikhethwa xa kuziwa ekusebenziseni izixhobo zokubonelela ngamava enkonzo yabathengi. Ngamanye amaxesha, iinketho ezimbalwa kwaye zigxile ngakumbi zenza umsebenzi ngcono kwaye ukhawuleze. Kananjalo, kunengqiqo ukukhokela abathengi bakho kulo lonke 'utshintsho' olwenziwa ngendlela yonxibelelwano olucacileyo nolusebenzayo kunye nokubonelela ngezinye iindlela zokuxhasa.
Imeko yesi-2: Awujongi “ngokwaneleyo” kumava enkxaso yabaxumi “EMBI”.
Abathengi bahlala beyithanda inkampani ngeminikelo yayo eyahlukileyo, amaxabiso okhuphiswano, ukusebenziseka lula, kunye neemveliso ezisemgangathweni, phakathi kwezinye izinto. Kunqabile kakhulu ukuba "amava omthengi olungileyo" afike kuluhlu lwezizathu zokuba kutheni bekhetha uphawu lwe-A ngaphezulu kwegama uB.
Nangona kunjalo, umdla, Inkonzo embi kubathengi ihlala sesinye sezizathu eziphambili zokuba abathengi bayeke ukuzibandakanya nophawu. Eminye imizekelo ethi qatha engqondweni:
Ezo zingapheliyo imigca emide efowunini evela kumnikezeli weenkonzo zabathengi.
Loo bhegi ulahlekile nje xa usiya kwiholide yakho.
Elo gumbi lihotele elingcolileyo eligqibe ukubiza ibhombu kwikhadi lakho letyala.
Uluhlu luyaqhubeka… Ayithethi into yokuba yonke le mizekelo yenzelwe amava amabi abathengi afuna ungenelelo kwangoko.
Ngapha koko, uphononongo olwenziwe liBhunga loQhakamshelwano nabaThengi lifumene iinkcukacha ezibangela umdla ekufuneka zibe yinxalenye yesicwangciso sabathengi ngasinye senkampani: Ibanga ukuba:
Ukuvuyisa abathengi akwenzi ukuthembeka; ukunciphisa iinzame zabo-umsebenzi ekufuneka bewenzile ukusombulula ingxaki-uyayenza.
IBhunga lokuNxibelelana nabaThengi
Oku kuthetha ntoni kukuba ukongeza kwexabiso lebrendi yakho kufuneka ujikeleze ekunciphiseni inkxalabo yabathengi endaweni yokubonelela ngezinto ezintle, ezingabalulekanga kangako.
Yongeza ekufumaneni kokuqala, ithi:
Ukusebenza ngabom kolu luvo kunokunceda ukuphucula inkonzo yabathengi, ukunciphisa iindleko zenkonzo yabathengi, kunye nokunciphisa ukukhwabanisa kwabathengi.
I-Keyaway: Abathengi bakulungele ukuziphindezela ngenxa yeenkonzo ezimbi kuneenkampani zomvuzo zenkonzo engcono. Ukuba i-brand yakho ayicingi ngeenyawo zayo kwaye inciphise ilog yangasemva yezikhalazo zabathengi ezonyukayo, iya kuwela phantsi umngxunya womvundla-ungaze uphinde uvuselele.
Imibuzo ephambili ekufuneka uyiqwalasele xa usamkela iNdlela "yoMthengi-Kuqala"
Xa kufikwa kumba wokuboleka uncedo kunye nendlebe enovelwano kubathengi bakho, kukho imibuzo ebalulekileyo efuna ukungeniswa ngaphakathi kunye nokuvavanywa:
Uhlobo oluBanzi lokuBuza:
Ngoobani abathengi bakho?
Zithini iimfuno / iimfuno zakho?
Ngaba ungadwelisa izinto ozikhethayo ezahlukileyo zabantu?
Uhlobo oluthe ngqo lokubuza:
Ngokwembono yabathengi, "ngokungxamisekileyo" kungxamiseke kangakanani xa kufikwa kwiimpendulo? Ngaba yimizuzwana eli-10, imizuzu emi-5, iyure, okanye usuku?
Loluphi uhlobo lwendlela ekufuneka ulusebenzise njengesiseko sohlobo lombuzo / inkxalabo. Ngokusisiseko, ifuna ukwahlula phakathi kwemicimbi efuna inkxaso yefowuni kunye nemicimbi enokuqwalaselwa kwi-intanethi. Ngokwesiqhelo, imicimbi yezemali ifuna inkxaso yefowuni kwisisombululo esikhawulezileyo nesisebenzayo.
Ingcebiso efanelekileyo: Xa kuziwa ekuqondeni umthengi wakho, thatha oku njengomgaqo wesithupha:
Mamela kwinto abathengi bakho abakuxelela yona-kodwa hayi kakhulu.
Udidekile? Masithathe umzekelo. Oko sithetha kona kukuba ngelixa abathengi banokuthi bacele inkxaso yefowuni, eyona nto bayifunayo yimpendulo ekhawulezileyo. Ukuza kuthi ga ngoku, kuyacetyiswa ukuba iqela lakho lenkxaso lifumane uqeqesho olunokubanceda ukuba bakhawuleze nangaphambi kokuba baphendule imibuzo yabathengi.
Iinkonzo kunye neengozi zeziXhobo eziPhezulu zeNkxaso yaBaxumi: Isikhokelo esikhawulezayo
Alithandabuzeki elokuba xa kufikwa kwiinkonzo zabathengi, iinkampani ezahlukeneyo zikhetha iindlela ezahlukeneyo-ngokwesiseko seemfuno zabo, ukulindelwa kwabathengi, inkxalabo yohlahlo-lwabiwo mali, njalo njalo. Kwaye kunye noninzi lwezinto ezikhoyo namhlanje, kunokuba nokudideka kwaye kungathandeki ukuthetha okuncinci. Ukwenza izinto zibe lula kuwe, sidwelise ezona zinto zilungileyo kunye nezilungileyo kwiindlela ezine eziphambili zokuxhasa abathengi ezisebenza namhlanje, ezizezi:
Ngaba yi "Fowuni eyiyo" yokuNikezela ngamava abaThengi aKhanyayo?
Iindlela zokusebenzisa inkxaso yefowuni:
Enye yeentlobo ezidumileyo kunye nezikhethwayo zeenkonzo zabathengi phakathi kweempawu kwihlabathi liphela.
Yindlela ethe ngqo yokunxibelelana engashiyi ndawo yazo naziphi na iimpazamo okanye ukungaqondani.
Ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ijongana neenkxalabo zabathengi kunye neemvakalelo zabo.
Kuyasebenza ekunyamekeleni imicimbi entsonkothileyo kwaye engxamisekileyo abanokujongana nayo abathengi.
Bendlela ngokusebenzisa inkxaso yefowuni:
Ingabonakala ngathi "iphelelwe lixesha" okanye iphelelwe lixesha ingakumbi kwisizukulwana esincinci njengoko bekhetha ukuthumela imiyalezo kunokuthetha.
Ingakhokelela kuxinzelelo olukhulu kunye nokudideka ukuba abathengi baphela belinde ixesha elide. Oku kwenzeka kakhulu xa iiarhente zixakekile okanye ukuba inkampani iphantsi kwabasebenzi.
Imiba yezobuchwephesha enje ngomnatha ombi unokuthintela abathengi ekufowuneni uncedo.
Ngaba “Ukuncokola” Ngaba Kunokwenza Umonakalo Omninzi Kunokulunga?
Iindlela zokusebenzisa inkxaso yengxoxo:
Inika isisombululo sombuzo esikhawulezileyo nesisebenzayo-ngamanye amaxesha njengoko phezulu njenge-92% phakathi kwabathengi!
Yindlela ebiza kakhulu kunenkxaso yefowuni kwaye isebenza njengesiseko solwazi.
Ixhobisa iiarhente / iibhodi zokuncokola nabantu abaninzi ngaxeshanye. Ngapha koko, idatha eyenziwe nguCallCentreHelper iphakamisa ukuba ngokujikeleza "Iipesenti ezingama-70 zeearhente inokubamba iincoko ezi-2-3 ngaxeshanye, ngelixa i-22% yeearhente zenkxaso zinokuphatha iincoko ezi-4-5 ngexesha.
Inceda iinkampani ukuba zenze iinkonzo ezizenzekelayo kwaye zibonelele ngamava akhokelweyo ngokudibanisa izinto ezinje ngekamva kunye nokukhangela ngokudibeneyo ngokulandelelana.
Inika amandla okugcina umkhondo wencoko (ihlala ihamba kwideshibhodi) esebenza njengereferensi efanelekileyo yekamva lomthengi kunye nommeli wabathengi.
Ixhobisa iimveliso njengoko zinokufumana ulwazi oluxabisekileyo (olukhutshwe kwiiseshoni zencoko ebukhoma) njengokuziphatha komsebenzisi, izikhalazo zangaphambili, izizathu zomthengi kunye nolindelo, njl njl.
Bendlela yokusebenzisa inkxaso yengxoxo:
NgokukaKayako, iimpendulo ezibhaliweyo ziyothusa kubathengi bakho. I-29% yabathengi bathi bafumana iimpendulo ezibhaliweyo ezixakekisayo, kwaye i-38% yamashishini ayavuma.
Ingakhokelela kwisisombululo esingonelisekiyo semicimbi ukuba ingxoxo ayikwazi ukujongana nenkxalabo yabathengi kwaye kufuneka ithumele umsebenzisi kwiarhente. Ngokwendalo, iphela ithatha ixesha elininzi kwaye ikhokelela kumthengi onganelisekanga.
Inokukhawuleza inyuke ukusuka ekuthandeni kwaye iluncedo ekucaphukiseni ukuba izimemo zencoko zisetyenziswa gwenxa okanye zisetyenziswa rhoqo.
Ubusazi? Idatha ngokuThengisaDive ibango lokuba abantu abangaphezulu kwama-55 babhekisa inkxaso ngomnxeba kwamanye amaqonga.
Imeyile sisiXhobo esitsha soNxibelelwano - Okanye ngaba kunjalo?
Iinkonzo zokusebenzisa inkxaso ye-imeyile:
Yenye yeendlela ezisetyenziswa kakhulu zonxibelelwano. Ngapha koko, idatha iphakamisa ukuba abantu bathumele 269 billion ii-imeyile yonke imihla.
Ixhobisa iimveliso ukuba zithumele imibuzo-ubusuku okanye imini, iintsuku ezingama-365 ngonyaka.
Inika ngokuzithandela, ubungqina obubhaliweyo (ngokusilela kwexesha elingcono) ukulungiselela ukubhekiswa kwixesha elizayo ukuze wonke umntu ahlala kwiphepha elinye.
Iphindaphindwe njengethuba lokuzenzekelayo imibuzo efanayo ngokusebenzisa izibonelelo zebhotile yengxoxo.
Inceda iimveliso ukunxibelelana nabathengi ngendlela ebunjiweyo kunye nengacwangciswanga. Unako kwakhona ukulandela-up kwiincoko ezidlulileyo ngokulula ngakumbi.
Bendlela ngokusebenzisa inkxaso email:
Ingakhokelela kwiimpazamo ezinganyanzeliswanga. Umzekelo, le imeyile yeAmazon yathunyelwa kubantu ababengalindelanga mntwana kwaye abanye babenemicimbi yokuzala! Njengoko unokucinga, ingqumbo yoluntu yayiyeyona nto iphambili kuyo. Ukujonga kuluhlu oluzenzekelayo lwababhalisi be-imeyile rhoqo ngoku-kwaye-ke kunyanzelekile ukunqanda ukungabinakho okunje ngezi.
Kuthatha ixesha elininzi ngokuchasene nenkxaso yefowuni.
Ayiboneleli ngesisombululo sombuzo kwangoko njengoko ii-imeyile zithatha ixesha elide ukuphendula. Oku kubi kakhulu njengoko uPhando lweForrester lubanga ukuba "iipesenti ezingama-41 zabathengi balindele impendulo nge-imeyile kwiyure ezintandathu."
Ifuna uninzi lwezakhono ezizodwa ezinje ngokukwazi ukufunda ingqondo yomsebenzisi kunye nokufunda phakathi kwemigca. Unxibelelwano alungqalanga ngakumbi kwaye lunokudityaniswa. Lilonke, umxholo wonxibelelwano unokulahleka ngokulula phakathi konaniselwano ngeimeyile ezininzi.
Inkxaso kwimidiya yoluntu:
Ngaba ukuba noBukho beNtlalo kwi-Intanethi yiBon okanye iBane?
Iinkonzo zokusebenzisa inkxaso yemidiya yoluntu:
Inikezela ngeendlela ezahlukeneyo apho iinkampani zinokujongana neenkxalabo zomsebenzisi ezinje ngezimvo zeposi, izingxoxo zabucala / ngqo, kunye nemiyalezo yeqela. Kuyanceda ukwenza uphando lweemarike kwaye uqonde ngcono umsebenzisi wakho.
Ukuba esidlangalaleni ngokwendalo, kuyanceda abasebenzisi ukuba bafumane iimpendulo kwimibuzo abanokuba nayo njengokuba umntu ebesele eyithumele ngaphambili. Amanqaku anokwenza iforum yoluntu ebopha abantu abathanda izinto kunye kunye nokunceda ukujongana nemibuzo / iinkxalabo zabo.
Ihlawulelwe ngokwenyani kwaye inika ithuba elikhulu lokufumana umva kubathengi.
Inokusebenza njengethuba elihle lokuba iimveliso ziphumelele ukuthembela komsebenzisi ngendlela yabathengi abathumela amava amahle. Iimpawu zinokusebenzisa uburharha kwaye ziyile ngakumbi ekujonganeni neenkxalabo zomsebenzisi! I-Skyscanner ibonisa oku ngokuqaqambileyo kumzekelo oboniswe apha ngasentla.
Ibonisa amandla enkampani okutshintsha kunye nokuziqhelanisa namaxesha anamandla njengoko kusebenza kwimidiya yoluntu kuyinto eyimfuneko namhlanje. Ukudityaniswa okukhulu njengophando olwenziwe yiNtengiso yeNtengiso kuqikelela ukuba “Abaneminyaka engama-25 ubudala kwaye ngaphantsi bakhethe imidiya yoluntu njengeyona ndlela bayithandayo yokunxibelelana nabantu. ”
Ikwavumela ukubandakanyeka okukhulu kwabathengi kwaye incede ii-brand ukuba zakhe ngokwenyani ubudlelwane obuxabisekileyo kunye nabasebenzisi.
Umngcipheko wokusebenzisa inkxaso yemidiya yoluntu:
Ingangcolisa igama lophawu lwentengiso ukuba uninzi lwezithuba ezingalunganga zibonwa kwimimandla yoluntu enje nge-Facebook, i-Twitter, njl.
Ibeka emngciphekweni wokuziphatha okungafunekiyo (umzekelo ukuxhaphaza / amagqabantshintshi) kwaye inokukhokelela kwimingcipheko yezokhuseleko enjengokuvuza kolwazi okanye ukukhangela.
Ifuna ukubeka esweni rhoqo kunye neempendulo ezikhawulezileyo ukunqanda abathengi.
Ukuxela ukuphinda kugqithe kulindelo lwabathengi kufanelekile ukuvelisa ukudideka, ukuchitha ixesha kunye nomzamo, kunye nexabiso elinikezelwayo.
Xa kuziwa ekukhetheni izixhobo zonxibelelwano zabathengi ezifanelekileyo, akukho bukhulu-bunye-zonke iindlela ezinokuthathwa ziimpawu. Imibutho kufuneka ijonge kumanqaku aphambili anje ngezixhobo ezikhoyo, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nokuthintelwa lixesha, iimfuno zabathengi kunye nokulindelwa ngumsebenzisi, njl.
Ngokubonelela ngokungenamthungo, ngaphandle kobunzima, ubuqu, kunye namava abathengi abahle kumsebenzisi.
Ngokuqinisekisa ukuba izicwangciso azibizi nkampani - ngemali okanye ngenye indlela.
Ngokubonelela ngexabiso elongezelelekileyo kubo bonke abachaphazelekayo ababandakanyekayo- ukusuka kubatyali mali nakubathengi ukuya kubasebenzi benkampani kunye noluntu ngokubanzi.
Uluxhobile lonke olu lwazi, lixesha lokuba uhambe ngentetho kwaye uhambise amava abathengi angenangqondo-leyo iyonwabisa kwaye ifundise abathengi ngaxeshanye. Uyangena? Sicinga njalo.
tags: uphawu lophawuInkxaso ye-imeyileinkxaso yemidiya yoluntu
U-Ashwini uyalithanda ishishini, ukurhweba, i-E-commerce, kunye neNtengiso yeDijithali. Usebenza kunye Zuza njengengcali yentengiso yedijithali. Ungumphefumlo okhululekileyo kunye nomfundi ofundayo ochitha ixesha lakhe kunye naye, athande kube kanye, umculo, kunye nokubukela nokudlala imidlalo. Ulikhoboka lolwandle kwaye ezindleleni ungumhambi ofuna ulonwabo ukuze afumane amava amatsha njengoko ejonge ebomini njengemisebenzi yethu yobugcisa.
Isikhokelo sokuGcina inkonzo yeVidiyo